Tripmasters समीक्षा: इटाली र ग्रीस | सडकको लागि एक युगल
डिसेम्बर 9, 2017 / 15 टिप्पणिहरु
Tripmasters.com एक वेबसाइट हो जुन हामीले धेरै वर्षको लागि प्रयोग गर्यौ जुन न केवल यूरोप, तर दक्षिण अमेरिका र एशिया पनि यात्राहरु बुक गर्न। एक लागत-बचत इन्जिन जसले राम्रो सौदों प्रदान गर्दछ, तपाईंले वर्षमा पहिले ट्र्याटमास्टर्सहरूमा हाम्रो पूर्ण समीक्षा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। तथापि, ट्रान्समेस्टरहरूको साथ इटालियन र युनानको भर्खरैको यात्राले हामीलाई रोम र युनान भन्दा अघि गर्नुभएको यात्रा कार्यक्रममा आधारित यो लागत-बचत बुकिंग साइटको मूल्यांकन गर्ने मौका दिए।
यदि तपाईंले पढ्नु भएको छैन भने ट्रान्समास्टरहरूमा मूल लेख, ट्रेसी र म तपाईंलाई यो काम गर्न आग्रह गर्दछु कि तपाई साइटले कसरी काम गर्दछ, यात्रामास्टरहरूको इन्टरफेस र कम्पनीमा सानो पृष्ठभूमि बारे थप जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ हेर्दै छौं, त्रिपमास्टरहरूमा पुस्तक कसरी गर्ने एक परिकल्पना को सट्टा, साइटमा बुक गरिएको छुट्टीमा वास्तवमा बाहिर जान्छ भन्ने वास्तविक संसार उदाहरण हो।
हामीले केही महिना पहिले हाम्रो सबैभन्दा हालिया भ्रमणको योजना बनायौं, र अन्ततः "ऐतिहासिक" विषयमा सुरू गर्नु अघि हामीले केहि विचारहरू गरेका थियौं। सामान्यतया, हामी पनि निर्णय गर्दछौं कि कुन विषयवस्तु वा भित्तालाई हामीले यात्राको लागि चाहानुहुन्छ, त्यसपछि संसारका कुन क्षेत्रहरू यो विचारलाई राम्ररी ठान्छन् भनेर हेर्नको लागि सुरु गर्नुहोस्। मुख्य चालकको रूपमा "इतिहास" संग, र हामी पनि एथेन्स वा रोममा पुगेन, यो निर्णय सजिलो थियो। हामी सबै एथेन्सको इतिहासलाई प्रस्ताव गर्न थाल्नुको लागि तयार थियो, र चरणहरू हिड्न थालें रोममा दान ब्रान्ड पात्रोहरू!
ग्रीस, एथेन्स मा अरचाउथुन।
एकपटक यो निर्णय गरेपछि, हामीले ट्र्याटमास्टर्समा टेलिभिजनहरू प्ले गर्न थाले। तपाइँ साइटमा साटो प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै उडान समयमा तपाईका यात्रा कार्यक्रममा सानो परिवर्तन वा शहरको क्रमले परिणाम बचत गर्न सक्छ। सैकड डलरहरूको। अंततः हामी सही यात्रा कार्यक्रम पाएको छ - रोम मा चार रातहरु को पछि तीनों को द्वारा Santorini र एथेंस मा, एम्स्टर्डम मा 14 घन्टा को लेआउट संग समाहित। तपाइँलाई मन पराउँछु, हामी फर्काउन सक्थ्यौं एम्स्टर्डम मा लेफ्टिनेंट, तर हामी शहरलाई प्रेम गर्छौं कि हामी वास्तवमा चाहन्थे लामो तहमा। यसले हामीलाई युरोपमा हाम्रो मनपर्ने होटेलमा थप गर्ने मौका पनि प्रदान गर्यो A-Train Hotel में Centraal एम्स्टर्डम।
यात्रामास्टरहरूको लचिलो बुकिंग व्यवस्थाको लागि धन्यवाद, हामीले यात्रामा 60% तल-भुक्तानी राखेका छौं, बाँकी रहेका शेष 40% लाई दुई किस्तमा भुक्तान गर्न सकिन्छ। यो विचार गर्न सजिलो थियो सम्पूर्ण यात्राको मूल्य $ 1,300 प्रति व्यक्ति थियो। अब, म तपाईंलाई याद दिलाउँछ कि $ 1,300 को लागि हामी प्रत्येकले यो पाउनुभयो:
मियामीमा रोमबाट अल्टिटियामा सिधा उडान
रेजीडेंजा एव रोमा, मा चार रातहरु, जो पूरी तरह टास्ट नदी Sant'Angelo को नजिकै नदी मा स्थित थियो
ईजियन एयरलाइन्समा एथेंसमा बिस्तारै संग रोम सम्म सेन्टोरिनबाट उडान
Santorini मा Theoxenia होटल मा तीन रातहरु (जो caldera सामना गर्न को लागि एक अपमानजनक सुइट मा बदल्यो - एक क्षण मा अधिक!)
ईजियन एयरलाइन्समा सैंटोरिनी देखि एथेंस सम्म सीधा उडान
एथेंस होटल्स प्लाकामा तीन रातहरू, जो एथेन्सिसको आधारमा एथेंसको सबैभन्दा लोकप्रिय इलाकामा एकदम राम्रो थियो।
एथेन्सबाट मियामीबाट उडान, एम्स्टर्डममा 14-घन्टा तहमा। रातभर माथी तहका कारण, हामी स्वत: A-Train बुक (केवल € 85) बुक गर्यौं, हाम्रो फिर्ती उडान घर अनिवार्य रूप देखि एक सीधा बनाउने
$ 1,300 ले तपाईंलाई कहीं र कहाँ प्राप्त गर्दछ? हाल यो लागत हो एक राउन्ड-ट्राफिक उडानबाट मियामीलाई लन्डनबाट। त्यो हो। कुनै होटल छैन। होइन 2nd शहर। अरु केही छैन।
त्यसोभए, हामीले ट्र्याम्मेस्टरहरूको मूल्य शुद्ध लागत परिप्रेक्ष्यबाट प्राप्त गर्न खोज्न सजिलो छ। तर, कसरी होटलहरू थिए? उडान कसरी थियो? कस्तो थियो यात्रा?
हामी यो मा अधिक लेख्न सक्नेछौं, तर मियामीमा रोमबाट रोमी बाट प्रत्यक्ष उडानमा हामी सबै भन्दा खराब अन्तर्राष्ट्रिय उडान थियो। कहिलेकाहीं। वास्तवमा, कल्पना गर्दा रयानएयर वा आत्मा एयरलाइन्स 10-घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय जियन्सहरू थिए। के तपाईं कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ? अझै डराएको छ? बिल्कुल। यो खराब थियो।
अलितालियामा यो सुन्दर दृश्य - पानीमा पर्दा धेरै फोटोहरू लिइएको छ।
अब, हामी यो गरीब उडान ट्रिपमास्टर्समा विशेषता गर्दैनौं, किनकि हामीले अल्टिटियामा छोटो हिल उडानहरू गरेका थियौँ जुन वेबसाइटमा भर्खरै ठीक थियो। यद्यपि, यदि तपाईंसँग मियामी र रोम बीचको लामो यात्रा गर्ने मौका छ भने - नगर्नुहोस्। किन? सानो सीटहरू (यहाँसम्म अपग्रेड गरिएको अर्थव्यवस्थाको लागि), खराब खाना, खराब सेवा (शून्य सेवाको साथ चार + घण्टा - पानी, कुनै तातोपानीमा), र अशिष्ट कर्मचारीहरू। केवल कहिलेकाहीँ तपाई बुझ्नुहुन्छ do तपाईंले के तिर्नु पर्ने भुक्तानी पाउनुभयो, र कहिलेकाहीँ धेरै धेरै छैन।
रेसिडेंजा एव रोमा
उडानको रूपमा खराब लाई रोम थियो, यसको लागि बनाइएको होटल। हामीले लेखेका छौं हामीले रिजिडिन्जा एव रोमालाई कसरी मजा लिनुभयो, हामी यात्रा गर्दा हामी वास्तवमा के चाहन्छौं। सानो, आरामदायक, आरामदायक, स्वच्छ, र धेरै न्यानो कर्मचारीहरू। स्थान एकदम सही थियो, र हामी हुनेछ हामी रोम फर्किने बेला फर्कनुहोस्।
हामीले टेक्नोलोजीमा तीन पटक पल्ट एजगनलाई रोम, सेन्टोरोनी सम्म राखेका थियौं र हाम्रो अन्तिम स्ट्यान्डको लागि सेन्टोरेनिबाट एथेन्सको फ्लाइट। उडानहरू सभ्य समयहरूमा थिए (रातो आँखाहरू), पूर्ण, सुरक्षित, राम्रो संगठित र समयमै। हामी यात्रामा एक विलम्बको मात्र श्वासर एक 15-मिनेट ढिलाइ Santorini बाट एथेंस फर्केर फर्किए, तर यो व्यावहारिक रूपमा केही छैन।
ईजियन एयरलाइन्समा आरामदायक उडान।
हामी विशालता, कर्मचारियों दया मा प्रसन्न भए र सामान्यतया हाम्रो उडानहरू पार्यौं। त्यहाँ एक पछाडि थियो, जुन हामी एक क्षणमा पुग्छौं, तर म धेरैजसो अरू एयरलाइन्सको लागि ईजजनलाई गल्ती गर्न सक्दिन - खराब खाना।
Santorini मा जाँदै, म मेरो राम्रो निर्णयको विरुद्धमा पुगेँ। रोमबाट एथेंसमा बिस्तारै हाम्रो उडानको लागि तयारी गर्न असफल भयो, मेरो भोकले मलाई परास्त गर्यो र मैले एक कुरा गरे जुन तपाई साँच्चै विमानमा गर्नु हुँदैन - खाओ। मैले मात्र खाएको थिएन, तर त्यो पास्ता थियो। पालक संग। अब, यदि तपाइँ सबै भन्दा एयरलाइन खाना बनाइने बारे जानकारी छैन भने, फरक दिनको लागि विषय हो। तथापि, यो जान्दछ कि यो ताजा छैन, र तपाईंको पाचन प्रणालीले सबै उच्च तरकारीमा छाड्छ, त्यो खाना ब्याक अप गर्न अनुमति दिन्छ, एक मनपराउने यात्री सिर्जना गर्नुहोस्, र प्राय: तिमीलाई बिरामी बनाउँछ।
मेरो लागि, यो हाम्रो पहिलो रात स्यानोटोनीमा खाना विषाक्ततामा परिणत भयो। Theoxenia को कर्मचारी, जो वास्तव मा परेशान देखि लग रहेको थियो कि हामी मेरी बीमारी को कारण देखि प्यारी सैंटोरेनी मा हराएको थियो, हामीलाई एक गर्भनिरोधक सूट को caldera को माथि मा उन्नत। हाम्रो दृष्टिकोण?
यो सानो कुरा जस्तै ...
हामीले थोरैक्सन गर्नुअघि थोक्ससेनियालाई मजा लिनुभयो तर हाम्रो सूट सूटमा र स्वास्थ्यमा फर्कियो हामीलाई हामीलाई अनुमति दिइयो साँच्चै एक कोठा मा एक दुर्लभ सैंटोरेनि अनुभव मा लिप्त भयो बाटो हाम्रो बजेट माथि।
त्यसोभए, यदि तपाईं सोचिरहेका हुनुहुन्छ कि कुन प्रकारका होटलहरू ट्रान्समास्टर्ससँग जडान गर्दछ, यो तपाईंको मनमा लिने तरिका हो। यो हाम्रो अनुभव 100% समय भएको छ।
प्लाका होटल हाम्रो होटेलमा सर्वश्रेष्ठ स्थानहरु मध्ये एक थियो, जस्तै यो मेट्रो लाइन को नजिकै थियो, महापुरूष को आधारमा, र पुरातत्व एथेन्स हिप मोनास्टिरकी र प्लाका जिलहरुमा। यो बिल्कुल सही थियो।
एथेन्स मा प्लाका होटल बाट महापुरूष को रात समय दृश्य।
प्लाका ठूलो होटल कोठाहरु मध्ये एक थियो जसको हामी ट्रिपमास्टर्स (अझै सम्म, अझै एक बुटीक) को माध्यम ले रहयो थियो, र रात को समय मा उनको छत देखि महापुरूष को एक अद्भुत दृश्य थियो। कर्मचारी ठूलो थियो, कोठा अविश्वसनीय रूपमा सफा र स्वच्छ थिए प्रेम ठाउँ।
हाम्रो एम्स्टर्डम देखि एम्स्टर्डम सम्म मियामी "असफल" को लागि बनाइयो जो एल्टिलिओिया थियो। अलिटलियाको रूपमा असामान्य रूपमा थियो, केएलएम जस्तो लागेर हरेक 45 मिनेट वरिपरिका पनीर, पानी घुमाउन र तपाईंको गलालाई खुसी पार्न तपाईंलाई खुशी दिन। यसले काम गर्यो, र मैले गर्भ गरिदिए।
कर्मचारी थियो असाधारण, र हाम्रो उन्नत अर्थव्यवस्था सीट (केवल मानक अर्थव्यवस्था देखि € 50 टक्कर) अपग्रेड लायक राम्रो थियो। 6'3 "मा, मैले स्पेस आउट गर्न, बाँकी छु, र अद्भुत उडान छ। कर्मचारीहरू या त संसारका उत्कृष्ट अभिनेताहरू भन्दा उत्कृष्ट व्यक्ति थिए, जस्तै कि 10 + घन्टा सजिलो रुपमा जान्छ र मैले विमानलाई सोचेको छु "म फेरि KLM उडान गर्न चाहन्नँ!"
यात्राको लागि योजना रोममा पर्याप्त समय खर्च गर्न "चीजहरू" हेर्न पाउनु भएको थियो, तर फ्लोरेंसमा केही समय बित्न र पोम्पा देख्न पनि। रोमको निकटताले हामीलाई यो गर्न को लागी अनुमति दिएको छ, किनकि हामीले दुवै यात्राका लागि यात्रा भ्रमण गरेका थियौँ (जुन सक्छ पनि Tripmasters को माध्यम ले गरिन सक्छ)। चीजहरू हाम्रो लागि ग्रीसमा बिस्तारै बिस्तारै, विशेष गरी खाद्य विषाक्तता संग अनौपचारिक पोषण र एथेन्समा ट्रासीको पछि लागी युद्ध पछि, तर हामीले धेरै काम गरेका थियौ र धेरै चीजहरू देखा पर्यो। कुल मिलाएर, हामीले एक थियो एथेंसमा अद्भुत समय, र ग्रीस मा सामान्य।
Tripmasters ले तपाईंलाई दुई सजिलै प्रयोगयोग्य तरिकाहरूमा तपाईंको भ्रमणको लेआउट दिन्छ। पहिलो, तपाईंको भ्रमणको भुक्तानी पूरा भएपछि, तिनीहरूले तपाईंलाई ई-मेल मार्फत पेपर वाउचर जारी गर्नेछ। यो अनिवार्य रूपले तपाईंको यात्रा कार्यक्रमको लिपि हुनेछ, तर तपाईंले उडान र होटलहरूमा जाँच गर्न आवश्यक सबै प्रमाणिकरण जानकारी समावेश गर्दछ। केहि होटेलहरू तपाईंलाई यो भाउचर देखाउने आवश्यकता पर्नेछ, जबकि अरूले मात्र तपाईँको नाम सोध्नेछ।
तथापि, ट्रिपमास्टरहरू 21 सदीमा पनि आईफोन र एन्ड्रोइडको लागि ट्रिपमास्टर एपको हालको रिलीज भएको छ। हामी यो बारे गहराईमा थप लेख्नेछौं, तर अनुप्रयोग सरल छ ठूलो। न केवल तपाईंको सबै यात्रा कार्यक्रम जानकारी र वाउचरहरू समावेश गर्दछ, तर तपाईं बाँचिरहेका शहरमा जीपीएस जानकारीको साथ आउछ, र तपाइँका लागि कुन स्थानमा तपाईका नजिकका कुन आकर्षणहरूमा वास्तविक-समय नजदीक हुन्छ - खाना, पेय सहित , आकर्षण, संग्रहालय, र किनमेल। मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत नयाँ प्रविधिको साथ "पहिलो दौड" लाई हामीले कस्तो कल्पना गर्नु भन्दा राम्रो छ।
यात्रा एक सफलता थियो, समग्र, र हामिलाई बाल्टीमास्टर्स संग जाने को द्वारा आसानी संग हाम्रो बाल्टी सूची को केहि प्रमुख इच्छाहरु दस्तक सक्षम थिए। तिनीहरूले मूल्यमा अनौपचारिक सेवा प्रदान गर्दथे जुन हामीले कुनै अन्य बहु-शहरको टूर एग्रीलेटरद्वारा मेल खाएनौं।
कुल मिलाएर, यो हाम्रो लागि ट्र्याम्पमास्टर्स वेबसाइटको माध्यमबाट एक धेरै नै उत्कृष्ट यात्रा थियो - एक राम्रो तरिकाले। लामो लम्बाईको अन्तमा कुनै रिट्जको प्रतीक्षा छैन, तर बिल $ 10,000 होइन, या त। जबसम्म ट्र्याम्मेस्टरहरूले यी प्रकारका साझेदारहरूसँग यो प्रकारको सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् (म तिनीहरूलाई यो अल्टिआयाया क्रान्तिमा एक पास दिनेछु), त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि हामी तिनीहरूसित बुकिंग गर्न जारी राख्नेछौं।
उपयोगी यात्रा संसाधन
गुगल नक्सा - Google नक्साको साथमा तपाईको भ्रमण कहीं पनि योजना बनाउनुहोस्। राम्रोका दिशाहरूका लागि पनि राम्रो!
Expedia.com - पुस्तक सस्ती आवास वा बन्डल उडानहरू र होटलहरू
एक यात्रा सहायक के हो हामी कहिले को बिना बिना यात्रा? आरएफआईडी सुरक्षित ट्रेवल मनी बेल्ट
सुझाव गरिएको पढाइ: जीवनभरको यात्रा: विश्वको सबैभन्दा ठूलो यात्राको 500
श्रेणी: युरोप, ग्रीस, समूह यात्रा, इतिहास, इटाली, यात्रा कार्यक्रम, समीक्षा, यात्रा योजना टैग: Aegean, एयरलाइन्स, alitalia, एथेंस, युरोपियन गन्तव्यहरू, greece, इटाली, klm, समीक्षा, रोम, santorini, यात्रामास्टर्सहरू
← समीक्षा: रिजिडेंजा एव रोम रोम, इटाली मा
ब्रान्ड नयाँ फोटोग्राफी ट्रिक्स 2018 मा हेर्न →
15 टिप्पणिहरु "ट्र्याटमास्टर्स समीक्षा: इटली र ग्रीस"
नमस्कार यहाँ तपाईंको पाठकहरूका लागि सेन्टोरिनीको एक मौसम गाइड हो, वर्षको सबै महिनाहरू समावेश छन्।
धेरै उज्यालो राम्रो काम गरीरह्नु
धन्यवाद! तपाईं आनंद उठाउनुभयो!
वाह, त्यो अविश्वसनीय सम्झौता हो। यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद, धेरै यात्रा गर्न उत्प्रेरित।
तपाईं मजा लिनुभयो, मरियम! त्यसोभए हामी किन लेख्छौं! 🙂
ट्राफिकेटर साँच्चै छुट्ट्याउने व्यवस्थाको लागि राम्रो छ ... मलाई लाग्छ कि तपाईले वास्तवमा त्रिपाम्टर कम्पनीसँग छुट्टै ती सुन्दर ठाउँहरू छुट्टी मनाउँथे।
यो एक महान कम्पनी हो, र हाम्रो कुनै पनि समीक्षा भुक्तानी समीक्षाहरू छैनन्। हामी बस कम्पनीको समान र विश्वास गर्छौ कि हामी हाम्रा पाठकहरूलाई पनि know जान्न चाहन्छौं
धेरै जानकारीपूर्ण र उपयोगी लेख। बाड्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईको महान काम ब्रिटेन राख्नुहोस्।
यात्रा जिउँदै छ, म धेरै यात्रा गर्दछु। राम्रो ठाउँहरू हेर्न सक्ने ठाउँहरू हेर्न मन लागेन, तर मेरो आफ्नै सम्झनाहरू बनाउनको लागि समय अब ​​मेरो विचार छ।
अचेल फोटोहरू, फ्लोरेंस र पोम्पेई म यात्रा गर्न चाहन्छु, हाँ एक दिन! .. तपाईंको यात्रामास्टर एप ब्राउज गर्नेछ जुन यो यात्राको दौडान वरिपरी एक सुन्दर स्वच्छ उपकरण जस्तो लाग्छ। अधिक को लागि फिर्ता आउनेछ ..,
धन्यवाद सुसान, तपाईलाई मजा आयो!
त्यो ठूलो मूल्य जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ कुनै वर्षको कस्तो समय, तर तपाईं मूल्यको राम्रो बुझ्नको लागि तपाईं जानुभयो महिना साझा गर्न सक्नुहुन्छ। Santorini मा विशेष रूप देखि होटल को मूल्यहरु, सीजन को द्वारा धेरै भिन्न हुन्छ ...।
धन्यवाद टोड! तपाईंले यो मजा लिनुभयो।
राम्रो समीक्षा। तपाईं होटल र एअरपोर्टबाट Tripmasters संग / स्थानान्तरण कसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ? के तपाइँ त्यो अतिरिक्त लागतको रूपमा थप्न चाहनुहुन्छ? ट्रिपमास्टरहरूमा इटली प्याकेजहरू हेर्दै म उत्सुक छु कि उत्सुकता / हवाईअन्तर्गत / होटेल / रेल स्टेसनले स्थानान्तरण कसरी गर्ने?
राम्रो प्रश्न, टानिया - अमेरिकी बाहिरका ठूला शहरहरूमा प्रायः मध्यप्राथमिक सार्वजनिक यातायात छ। हामी धेरै रेलहरू प्रयोग गर्दछौं, र सँधै निश्चित छ कि हामीले टिकटहरू / नगदहरू पछाडि अघि बढाऔं, जुन जुन हामीले चाहिन्छ। शहरमा निर्भर गर्दछ, क्याबहरू ठीक छन्। आफ्नो टैक्सी भन्दा पहिले एक टैक्सी खर्च हुनेछ कि आफ्नो यात्रा भन्दा अनुमान अनुमान चलाउनुहोस्, बस सुनिश्चित गर्न को लागी तपाईं आफ्नो बजेट बस्ट गर्दैन!